January 16, 2021 - Padaethar
ငွေကံပွင့်စေဖို့ ၊ အကြွေးရနိုင်စေဖို့ ( ၇ )နေ့နံ မီးထွန်းပိုက်ဆံယတြာ
ငှကေံပှငျ့စဖေို့ ၊ အကွှေးရနိုငျစဖေို့ မီးထှနျးပိုကျဆံယတွာ ငှကွေေးကံပှငျ့စဖေို့ ကံတဈခုဖနျတီးယူတဲ့သဘောပါ ပထမတဈကွိမျတငျပေးခဲ့တုနျးက ရေးတာကို သဘောမပေါကျကွဘူး ပထမတဈကွိမျတုနျးကလညျး အောငျမွငျသူတှေ တျောတျောမြားမြားရှိခဲ့ပါတယျ ။ ငှကေံပှငျ့စဖေို့ ၊ အကွှေးရနိုငျစဖေို့ မီးထှနျးပိုကျဆံယတွာကို ပွုလုပျနိုငျပါတယျ ကံပေးသလောကျရကွမှာပါ မိမိတို့ နသေ့ားသမီးအလိုကျ ပနျး-အရှကျ တမြိုးမြိုးကို ပိုကျဆံ ၅၀၀ တနျ ပိုကျဆံ ကို ဖွနျ့လကျြဖွဈစေ မီးခှကျ အောကျက ခံပွီး ဘုရားစငျမှာ ပူဇျော နိုငျပါတယျ။ တဈပတျ ပူဇျောပီးပွီဆို အဲဒီ ပိုကျဆံ ကို လိုအပျရာနရော တခုခု မှာလှူဒါနျးလိုကျပါ ဒါပါပဲ ပွုလုပျရမယျ့အခြိနျကတော့ မအားမလပျဖွဈနသေူမြား ကွိုကျတဲ့အခြိနျထှနျးပါ ။ အခြိနျပေးနိုငျသူမြားကတော့ နတေ့ဈနရေဲ့ အကောငျးဆုံးအခြိနျတှပေေးထားပါတယျ … Read more
ဒူးနာတဲ့သူတွေကို ကိုယ်ခြင်းစာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ (လက်တွေ့ ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်ခုပါ)
စာရေးဆရာမ လှိုင်း(တောင်ကြီး)ရဲ့ လက်တွေ့ ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်းတစ်ခုပါ။ ဒူးနာပျောက်တဲ့ဆေးနည်း ပြောပြမယ် နော် လက်တွေ့သက်သာခဲ့တာမို့ ဒူးနာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ကျမညာဖက်ဒူးကတစ်စစ်စစ်နဲ့ကိုက်ကိုက်ပြီးနာနေတာ တော်တော်ကြာပေါ့ နာလာရင်အော်နေရတယ် ဆေးမျိုးစုံလိမ်းကြည့်တာ ပူပြီးနံတယ် …ခဏသက်သာတယ်ပြန်ဖြစ်ရော …ဒါနဲ့ ခြေဖနောင့်နာတုန်းကလုပ်ဖူးတဲ့ ဆေးနည်းအတိုင်း လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ပြန်လုပ်ကြည့်တာ ခုတော့ပျောက်သွားလို့ ရန်ကုန်မှာချော်လဲလို့ရတဲ့ ဒဏ်ရာနာနေတာကြောင့်ခုပြန်လုပ်ထားပါတယ်…. ခြေသလုံးပုံပါနေလို့ကန်တော့ပါရှင်….ရှားစောင်းလက်ပတ် လက်တစ်ဝါးစာကို ဆူးတွေ လှီးထုတ်ပြီးအပြားလိုက်နှစ်ခြမ်းခြမ်းလိုက်ပါ ….ပြီးရင်မီးနွေးနွေးလေးကင်ပါ အပူခံနိုင်သလောက်ကင်ပြီးရင် ဒူးခေါင်းပေါ်မှာဖြေးဖြေးခြင်းတင်ပါ ….. ပြီးရင်ရှားစောင်းလက်ပတ်ပြုတ်ကျမှာစိုးလို့ပုံပါအတိုင်း ကြွပ်ကြွပ်အိပ် ကိုအနေတော်ညှပ်ပြီ အပြင်မှာပြန်ကပ်ထားပါ ….ပြီးရင် ကြွပ်ကြွပ်ကြိုးနဲ့မလျှော့မတင်းစီးပြီးထားပါ သွားစရာမရှိရင်တော့ နေလည်လဲလုပ်ထားလို့ရပါတယ် ….. ညအိပ်ရာဝင်လုပ်ထားရင် ပိုကောင်းတယ် တစ်ညလုံးစည်းပြီးအိပ်လိုက် မနက်ကျတော့ပြန်ဖြေ နောက်ရက်ညအိပ်ရာဝင်တစ်ခါထပ်လုပ် အနာပေါ်မူတည်ပြီးပျောက်ပါမယ် …..ကျမတော့ ၃ ရက်ဆက်လုပ်တာနဲ့ခုပျောက်သွားပြီ ….. ခုတော့ချော်လဲထားတဲ့ ဘယ်ဖက်ဒူးကဒဏ်ကိုပြန်လုပ်ထားတာပါ ….ခြေဖနောင့်နာရင်လဲ ဒီအတိုင်းပဲလုပ် … Read more
ခန့်ညားတဲ့မြန်မာဘုန်းကြီးဆိုပြီး တရုတ်နိုင်ငံအထိတောင် ဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ ပိုင်တံခွန်
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသားချောလေးပိုင်တံခွန်ကတော့ အသက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးပေမယ့် အနုပညာအလုပ်တွေကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အနုပညာအရည်အသွေးတွေကလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုပိုတိုးတက်လာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေအားပေးရကျိုးနပ်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တံခွန်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကတော့ မြန်မာပြည်မှာသာမက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအထိပါရေပန်းစားနေလို့ မြန်မာပြည်အတွက် ဂုဏ်ယူရပါတယ်နော်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်လည်း ပိုင်တံခွန်က ထိုင်းနိုင်ငံက မိန်းကလေးတွေကြားမှာ အရမ်းရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံက ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီးတွေနဲ့လည်း ကြော်ငြာတွေအတူတူရိုက်ကူးရလို့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အနုပညာစန်းက အရမ်းကောင်းပါတယ်နော်။ ပိုင်တံခွန်က အရမ်းအောင်မြင်လာပေမယ့်လည်းမာန်မာနမကြီးဘဲ သဘောကောင်းဖော်ရွေပြီး ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာလည်းလေးစားလို့ လူတိုင်းကချစ်ခင်အားပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း ပိုင်တံခွန်က တရုတ်ပြည်မှာပါ ဆက်လက်အောင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တံခွန် ရဟန်းဝတ်တုန်းကပုံတွေဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံမှာ “ခန့်ညားတဲ့ဘုန်းကြီး”ဆိုပြီး Weibo hot searchထဲမှာ No.20နေရာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ကတော့ “တရုတ်လိုပါသင်ရတော့မယ် ထင်တယ်”ဆိုပြီး တရုတ်နိုင်ငံကပရိသတ်တွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်တံခွန်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေက ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထရလောက်အောင်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလို့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Video ကြည့်ရန် Swelsone News Unicode ပရိသတျကွီးရေ မငျးသားခြောလေးပိုငျတံခှနျကတော့ … Read more
ရဟန်းများမကြွထိုက်သောအိမ် (၉)မျိုး ( ရှယ်ပြီးမှ ဖတ်ကြည့်ပါ )
အ သက် (၁ ၆) နှစ် မှ (၂ ၄) နှစ်အ တွင်း မိန်းကလေး များသာ ဖတ်ရန် (တစ်ခြားလူမဖတ်ရ)
အ သက် (၁ ၆) နှစ် မှ (၂ ၄) နှစ်အ တွင်း မိန်းကလေး များသာ ဖတ်ရန် (တစ်ခြားလူမဖတ်ရ) ညီမေ လးရေ …. လှပတဲ့ မျက်နှာ တစ်ခုက တစ် ချိန် ကျ ရင် အို မင်း သွားလိမ့်မယ် . . . . .။ စွဲမက်စရာ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း တွေ က လည်း တစ်ချိန် ကျရင် ပြောင်း လဲ သွားပါ လိမ့် မယ် နော် . . .။ ဒါပေမယ့်…. မိန်းမကောင်း တစ်ယောက်က တော့ တစ်ချိန် ကျရင် … Read more